Amasiko - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Isifinyezo somsebenzi saphakathi nonyaka ka-2020 nokuhamba izintaba 2020.7
Isifinyezo somsebenzi saphakathi nonyaka sizobanjwa unyaka nonyaka. Okuqukethwe jikelele kwesifinyezo kumayelana nokuhlola nohlelo neziphakamiso. Inzuzo enkulu yesifinyezo ukuthi inkampani izolanda iziphakamiso eziningi kubasebenzi bese iyazisebenzisa.
Umhlangano obubanjelwe eNtabeni edumile yaseQingcheng eChengdu ngalesi sikhathi. Ngemuva komhlangano, thina ube nohambo lokuzulazula ehlane futhi wajabulela isikhathi esihle kakhulu.
Gubha unyaka omusha ka-2020 waseChina 2019
Ukubungaza unyaka omusha we-2020 wamaShayina, sonke sathola izipho ezivela enkampanini, kanti nozakwabo abavelele nabo bathola imivuzo. IXY Towers ibonge wonke umsebenzi ngokuzikhandla kwabo futhi babheke phambili ekusaseni eliqhakazile ndawonye ngo-2021.
Ukwazi uzakwethu uChangquan Zhang, osebenza emnyangweni wezokukhiqiza uthole ukukhanselwa futhi ukwelashwa ngamakhemikhali kudinga izindleko eziphezulu zezokwelapha, inyunyana yabasebenzi be-XY tower yakhipha isiphakamiso sokunikela ngesihe kubo bonke abasebenzi. Isikhathi esithile, ozakwabo abaningi benkampani bahlanganyele kulo msebenzi wothando. Kusukela ngoFebhuwari 3, 2018, sekuqoqwe iminikelo engu- $ 1.6 isiyonke .Lo mnikelo usudluliselwe ngokushesha kuChangquan Zhang evela enhlanganweni yenkampani ukuze ayolashwa.